Snapdragon 810 နှင့်ပြproblemsနာအသစ်များ Androidsis
Alfonso က de Frutos | | HTC က, UHI, NOTICIAS
ထိုအချိန်တွင်ငါကြောင်းသတိပေးခဲ့သည် Qualcomm Snapdragon 810 SoC နှင့်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည် ငါအမြီးကိုဆောင်ခဲ့သွားခဲ့သည်။ သငျသညျအကွောငျးကိုရှုပ်ထွေးအားလုံးမှတ်မိပါသလား အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူ၏ပရိုဆက်ဆာသည်တကယ်အပူဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေ၊? ကောင်းပြီ၊ HTC သည်ဘာစီလိုနာမြို့၌ကျင်းပသော Mobile World Congress 2015 တွင်အညိုရောင်ကိုထည့်သည်။
LG နှင့် Xiaomi တို့သည် Snapdragon 810 နှင့်သူတို့၏ထင်ရှားသောပြသမှုကိုတင်ပြသည့်အခါအမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူ၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမတွေ့ပါဟုပြောဆိုခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ဒီကTerminal အပူပေးသောသတိပေးချက်ကိုပြသောပုံသည်အခြားအရာတစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေသည်။
ရိုးရိုးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ် Snapdragon 810 SoC သည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသလော။
ရိုမေးနီးယားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည်ဤအငြင်းပွားဖွယ်ပုံရိပ်ကိုစစ်ထုတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် HTC One M9 မျက်နှာပြင်ဖန်သားပြင်ပေါ်လာသောအခါလူသိများသော AnTuTu benchmarks application မှတဆင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။နောက်ထပ်သတင်းစကားအပူ။
»ကိရိယာ၏အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးစက်ကိုအအေးခံပြီးနောက်တစ်ခါစစ်ဆေးပါ။ စမ်းသပ်မှုဆက်လုပ်လျှင်စနစ်သည် reboot ဖြစ်စေ၊ ပိတ်နိုင်သည်။
။ Per ဒါဟာမတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ LG G Flex2သည်မည်သည့်ပြproblemနာမှမပါရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းကိုတောင်ကိုရီးယားတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အဓိကထုတ်လုပ်သူများ၏မတူညီသောရပ်တည်ချက်များရှိတယ်လီဖုန်းများအားလုံးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပြallနာများ၊ အထူးသဖြင့်အလျင်အမြန်ပြန်လည်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သောပြည့်နှက်နေသောဆိပ်ကမ်းများရှိခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ရှားပါးသည်။ Snapdragon9SoC ပါသည့် HTC One M810 သည်အပူလွန်ကဲမှုပြသနာများကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည် Qualcomm ၏ကြယ်ပရိုဆက်ဆာစတင်ခြင်းကိုဆွဲဆောင်နေသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကယခုဤ SoC နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောဆိပ်ကမ်းများသည်ဤ MWC ၂၀၁၅ တွင်အလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? Snapdragon 810 ၏ရိုးရှင်းသောတိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Snapdragon9SoC ဖြင့် HTC One M810 သည် MWC တွင်အပူလွန်ကဲသည်
Sergio Deejay ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် MWC တွင်အပူလွန်ကဲခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားတစ်နေကုန်ဖန်သားပြင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးစွမ်းအင်ချွေတာမှုအသုံးမပြုဘဲလူတိုင်းကိုထိမိသည့်နေရာနှင့်လုံးဝရပ်နားခြင်းမရှိပါ။ သာမန်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနှင့်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်ကလေးလံသောအသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်တောင်မှ၎င်းကိုမပေးနိုင်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
Sergio Deejay အားပြန်ပြောပါ
Bros Yair Reyes, Luis Jaramillo ကိုကြည့်ပါ
ကောင်းပြီ ... ငါထင်တာကမိုဘိုင်းကိုပိုပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်မိုးသည်းထန်စွာသုံးစွဲသူဖြစ်ဖို့မလိုဘူး၊ သူတို့ရပ်တည်ချက်မှာပေးထားတဲ့အရာထက်ပိုတယ်။ အလယ်အလတ်အဆင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဂိမ်းသည်မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာများကိုအင်တိုက်အားတိုက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်မိုဘိုင်းသည်မည်သည့်ရပ်ကွက်တွင်မဆိုရှိပါကလူများက၎င်းအားအခြားအရာများထက်ပိုမိုမြင်စေရန်ပြုလုပ်သည်။ MWC ကဲ့သို့သော site တစ်ခုတွင်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်အချိန်တိုအတွင်းမိုဘိုင်း၏ cpu / gpu ကို overload လုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အချို့သော program များကိုတင်ရန်တိုက်ရိုက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဖြစ်ပျက်မှုကငါ့အတွက်ယုတ္တိမရှိပုံရတယ်။ အပြင်ငါနောက်ထပ်သွားပါ။ ကျနော့်အမြင်အရဒီဖြစ်ပျက်မှုဟာကျွန်တော့်အတွက်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့သောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၂.၀၀ Ghz (စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဥပမာပြောရမယ်) သည်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုပြောသောကြောင့်ဤအမြန်နှုန်းကိုကာလရှည်ကြာစွာထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ HTC ကမိုက်ကရိုဖုန်းကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းကောင်းစသည်တို့စသည်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ Intel သည်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုအကွာအဝေး၏ထိပ်ရှိပရိုဆက်ဆာတစ်ခုပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သောအခါသိထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ , နှင့်၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုများထက်မပိုပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုအနိမ့်အကွာအဝေးတွင်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး၎င်းကဲ့သို့ရောင်းချသည်။ ကောင်းစွာ၊ ယခုသူတို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်အခါ Snapdragon 2.00 နှင့်ပတ်သက်သောအရာတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပူလာရင်ဒါမှမဟုတ်အဆုံးမှာတော့ကောလာဟလတစ်ခုသာထွက်လာတယ်။ Qualcom မှလူကြီးလူကောင်းများသည်နိမ့်ကျသောအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောချို့ယွင်းချက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းသည်ကံဆိုး။ အလွန်လေးနက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။
HTC One M9 ပျောက်ဆုံးနေသောအရာသည် !!! အကယ်၍ ၎င်းသာမှန်လျှင်သူတို့သည်လုံးလုံးသင်္ဂြိုဟ်ခံထားရသည်။
Yair Reyes ဟုသူကပြောသည်
Yair Reyes အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ Bro ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တူညီတဲ့ပရိုဆက်ဆာနဲ့အခြားထုတ်ကုန်တွေမှာဒီပြသနာရှိနေရင်ဒါကအရမ်းလေးနက်လိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် Galaxy S6 သည်အမြင့်ဆုံးအရောင်များကိုတပ်ဆင်ထားသဖြင့်အပူမပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းအားအကာအကွယ်ပေးထားသည်။ အကောင်းဆုံးမှာအားလုံးမဟုတ်ပါ။ 810 သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းသည်အလေးအနက်အပူပေးနေသည်။ ကြီးစွာသောသားရဲ Exi သတ္တု octa core မှန်လျှင်
လူးဝစ် Jaramillo ဟုသူကပြောသည်
Mmmm သင် exinos အသစ်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်
Luis Jaramillo ကိုပြန်သွားပါ
Josué Joel Valverde ဟုသူကပြောသည်
Josué Joel Valverde ကိုပြန်ပြောပါ